स्थानीय सरकारले समयमै राहतको व्यवस्था गर्न सकेन - Arunkhabar.com
प्रकाशित : ६ श्रावण २०७६, सोमबार १७:४०
विराटनगर, ६ साउन । स्थानीय सरकारले बाढी तथा डुवान पीडितहरुलाई समयमै राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।
मोरंगको ग्रामथान गाउँपालिका वडा नंं. ५ मा विपद् जोखिम न्युनीकरण संवन्धिको साझा सवाल कार्यक्रमका सहभागिहरुले राहतको नाउँमा पानी र चाउचाउ मात्रै पाएको बताएका छन् ।
वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनलको सहयोगमा नारी विकास संघ विराटनगरले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय रेनुका भुजेलले स्थानीय सरकारबाट समयमै राहत पाउन नसकेको बताउनुभयो । अस्मिता चौधरीले एक पटक चाउचाउ र पानी वितरण गरिएपनि डुवानमा परेका सवैलाई नपुगेको बताउनुभयो ।
ग्रामथान ५ का चतुरलाल खाँले बाढी र डुवानको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । बाढीपछि बालबालिकाहरु विरामी परेकाले घर घरमा स्वास्थ्य परिक्षणका लागि टोली खटाउन आग्रह गर्नुभयो । प्रमोद धमलाले पानीको निकासमा गाउँपालिकाको ध्यान पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
समयमै पानी निकासमा गाउँपालिकाले ध्यान पुर्याएको भए धेरै घर डुवानमा नपर्ने उहाँको भनाई छ । गाउँपालिका उपप्रमुख फूलकुमारी चौधरीले बाढी तथा डुवानमा परेकाहरुको तथ्यांक संकलनको काम भईरहेकाले चाँडै राहत वितरण गरिने बताउनुभयो । विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहउको उपप्रमुख चौधरीको भनाई छ ।
वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष खड्गनारायण खाँले राहतका लागि संवन्धित निकायमा पहल भईरहेको बताउनुभयो । विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि विभिन्न सचेतनामुलक काम वडा कार्यालयले गर्ने बताउनुभयो ।